Ahoana no mifidy fanaka? -Ozinina Alice
Ny fanaka samihafa dia mampiasa fitaovana samihafa.
1. Jereo ny fitaovana fanaka
Ny fanaka samihafa dia mampiasa fitaovana samihafa. Ohatra, ny tongotry ny latabatra sy seza ary kabinetra dia mitaky hazo maro samihafa, izay somary matanjaka sy mahazaka enta-mavesatra, fa ny fitaovana hafa dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana anatiny; Ny hatevin'ny tongotry ny akanjo dia tsy maintsy mahatratra 2,5cm koa. Manjavozavo ny hateviny, ary mora miforitra sy miondrika ny manify; ny lakozia sy ny efitra fandroana dia tsy azo atao amin'ny fiberboard, fa tokony ho vita amin'ny plywood, satria ny fiberboard dia hivelatra sy hanimba rehefa tratran'ny rano; latabatra fisakafoana dia tokony hosasana.
2. Jereo ny rafitra famolavolana fanaka
Ny fanaka madinika, toy ny seza, seza, fehin-tanana, sns, dia azo taritina amin’ny gorodona vita amin’ny simenitra rehefa mifidy, ary mazava tsara ny feo, izay mampiseho fa tsara ny kalitao; raha moana ny feo dia misy mimenomenona, izay manondro fa Tsy mafy ny tonon-taolana ary tsy matanjaka ny rafitra. Ahoana no hividianana fanaka? Izany hoe, ny birao fanoratana sy ny latabatra dia azo hozongozonina amin'ny tanana mba hahitana raha toa ka milamina izy ireo. Afaka mipetraka eo amin'ny sofa ianao mandritra ny fotoana fohy. Raha mipetraka eo amboniny ianao, dia hitsoaka sy mihozongozona, ary ho asa fantsika. Tsy haharitra ela izany.
3. Ny fanaka dia tokony hifanaraka amin'ny trano anatiny
Ahoana no hividianana fanaka? Ny lokon'ny fanaka novidina dia azo ampifandraisina amin'ny fiafaran'ny efitrano, ary ny loko sy ny jiron'ny efitrano anatiny dia azo ampiasaina ho tari-dàlana lehibe indrindra. ohatra. Raha mavesatra ny loko ambadiky ny efitrano, dia. Amin'ny ankapobeny dia tsy mety ny mifidy fanaka lalina, satria ny fanaka lalina dia hahatsapa ho mavesatra kokoa amin'ny toerana misy feo mafy. Ary hitroka hazavana izy io, ka hamorona atmosfera anatiny mavesatra sy manjavozavo. ankoatry ny. Raha mafy loatra ny lokon'ny fanaka, dia tsy hijery tsara izany, ary hamokatra mora foana ny vokatra hita maso.
4. Jereo ny fitaovana
Ny fanaka amin'ny fomba Eoropeana an'i Piyi dia tsotra kokoa amin'ny endriny, samy manana ny hatsarany ary samy manana ny toetrany. Ny fitaovana samihafa dia mety amin'ny olona samihafa. Ny fanaka eoropeana dia mizara ho hazo mafy orina, zavakanto hoditra, zavakanto lamba, fitambaran-kazo vita amin'ny hazo, sns., Ny fanaka hazo matanjaka dia amin'ny ankapobeny kokoa ny tontolo iainana sy mirentirenty kokoa, fa ny fanaka hazo mafy dia lafo.
5. Jereo ny dingana modeling
Amin'izao fotoana izao, ny isan'ny vokatra vita sokitra tanana an'ny tompo malaza dia tena voafetra, ary ny vidin'ny fanaka dia miakatra ho azy. Ny vokatra vita sokitra tanana dia mazava kokoa sy aura kokoa noho ny vokatra vita sokitra mekanika, noho izany dia manana sanda avo be izy ireo. Asa tanana maro no nozaraina nandritra ny an-jatony taona maro, manana fahaiza-manao miavaka sy kolontsaina matanjaka.
6. Jereo ny ampahany miafina
Jereo ny elanelana misy eo amin'ny banga eo amin'ny varavarana sy ny banga amin'ny vatasarihana ny fanaka. Arakaraky ny lehibe kokoa ny elanelana no mahasarotra ny asa, ary ny ela kokoa no hiova endrika. Ireo no hita raha toa ny fanaka natao tamim-pitandremana. Ny mpanjifa dia afaka mikitika ny fanambanin'ny fanaka toy ny latabatra kafe mba hahitana raha efa voatsabo. Tandremo raha tsy mirindra na mivadika ny sisiny famehezana.
Alice Factory dia mpanamboatra matihanina amin'ny fanaka nameplates. Afaka mamokatra zinc firaka, aluminium, varahina, varahina, pvc, sns Ny famantarana ataontsika dia mety indrindra ho an'ny fitaovana an-trano, fanaka, sns.
Précédent Inona avy ireo karazana fanaka klasika? Manampy anao hahatakatra bebe kokoa izany-Alice factory
Inona no tombony amin'ny fomba fandravahana japoney? -Ozinina Alice MANARAKA